संसदमा पुग्यो अरिंगाल प्रकरण, प्रतिपक्षको प्रश्न– कता लक्षित हो ?
काठमाडौं – विरोधीप्रति अरिंगालजस्तै खनिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको अभिव्यक्तिप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको सोमवार बसेको बैठकको शून्य समयमा कांग्रेस सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कोप्रति लक्षित हो भनी प्रश्न गरे ।
राजेन्द्र केसीले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई अत्यन्त आपत्तिजनक रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनता त्रसित र आतंकित छन । निर्मला पन्त हत्याको सक्कली अपराधी को हो भन्ने आपराध हो ? मण्डलामा विरोध गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अपराध हो ?’ केसीले भने, ‘विपक्षलाई हमला गर्ने कुराबारे सदनमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ चाहिन्छ ।’
सांसद मीनाक्षी झाले आलोचनाबाट सरकार सुध्रिनु पर्नेमा प्रधामनन्त्रीले आलोचना गर्नेलाई अरिंगाल जस्तो भएर लाग्नु भन्नु खेदपूर्ण शब्द हो । ‘उहाँ देशको प्रधामनन्त्रीले संगठित अपराध जस्तो भयो, बोलीमा संयमित हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
मीना पाण्डेले अरिंगालजस्तो जाइलाग्नु भनेको कसलाई हो ? प्रतिपक्षलाई कि अरुलाई ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।